Ny toky, fitaka; ny atao no tsy hita… | NewsMada
Ny toky, fitaka; ny atao no tsy hita…
Mbola resaka tsy fifampitokisana ihany… Efa voka-javatra izay nitranga tamin’ny savorovoro sy sahotaka noho ny tsaho hoe misy andiana mpitsabo miaraka amin’ny mpitandro filaminana manao vaksinina pesta any an-tsekoly.
Efa tsy atokisan’ny vahoaka ifotony intsony izao ny mpitondra, na inona lazainy sy ataony. Mampieritreritra. Ny toky tokoa, fitaka; fa ny atao no hita. Ireny, ohatra, ny fihetsika nandeha ho azy tamin’ny vahoaka tamin’iny.
Inona na ahoana koa ny manaraka? Be loatra izay lazaina fa tsy atao, na izay atao fa tsy lazaina. Nanomboka tamin’ny hoe fanafoanana ny delestazy ao anatin’ny telo volana io, tsy mba nialan-tsiny na noho ny fihavanana ihany aza.
Nandalo tamin’ny fanatanterahana asa nanaovana amparitra hoe vitaina isaky ny zato andro, tsy hita izay tohiny sy fiafarany. Fandrendrehana sy fandrebirebena vahoaka: niandry ny rehetra, fa tsy nisy vita na tatitra ihany aza.
Teo koa ny hoe fanatanterahana fifidianana amin’ny faritra, faritany, fokontany…. Narirarira ary tsy nahitana rariny sy rirany tamin’ny fandrafetana lalàm-pifidianana. Mandraka izao, ifandroritana izany: inona ny marina, aiza ho aiza?
Nandalo tamin’ireo raharaha mafanafana ratsy hoe tsy maintsy karohina sy hita ary havoaka ny marina. Nefa inona ny eo raha tsy hiteny afa-tsy ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine“, ohatra, na ny “Raharaha Antsakabary”…?
Amin’izao, eo ny momba ny vidim-bary: nampanantenaina hoe hihena fa hitobaka ny vary nohafarana. Kinanjo, vao mainka misondrotra… Nefa vao manomboka ny maitsoahitra. Mbola misy antenaina sy itokisana amin’izany?
Toy izany koa ny amin’ny famerenana ny fandriampahalemana ao anatin’ny telo volana, fa tsy hita izay eo… Vao mainka miharatsy aza ny raharaha, matoa nitaky fifanatrehana amin’ireo tomponandraikitra ireo depiote.
Mora na maro ny manadino izany karazana fampanantenana izany: tsaho avokoa? Na mbola azo itokisana izay lazaina sy atao… Ny toky tokoa, fitaka; ny atao, tsy hita. Mbola azo itokisana amin’ny fifidianana?